मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट, भाग्यमानी दुई जनाले पाए ११ कित्ता
२८ असार, काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलको कार्यालयमा बिहान ९ः३० बजे सो आईपीओ बाँडफाँट भएको हो ।
आवेदनभन्दा बढी माग परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार बाँडफाँट गरिएको हो । जसअनुसार ३६ हजार ३४९ जनाले लघुवित्तको शेयर प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये भाग्यमानी २ जनाले थप १ कित्ता अर्थात कुल ११ कित्ता शेयर प्राप्त गरेका छन् ।
लघुवित्तले असार १७ गतेदेखि प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो । यसमध्ये लघुवित्तले ६ हजार ५८ कित्ता अर्थात जारी पूँजीको ०।५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीहरुका लागि र कुल निष्काशनको ५ प्रतिशत अर्थात १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ ।
बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ता मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको हो ।
महामारीबाट आक्रान्त भएको मौका छोपर निर्माण सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढाइयो
दशैंका लागि मासुकाे मूल्य निर्धारण, कस्ताे मासुकाे कति मूल्य पर्छ जान्नुहाेस् ?
अध्यक्ष कोरोना सङ्क्रमित भएपछि गाउँपालिकाको कामकाज बन्द
आकस्मिकबाहेक अन्य शल्यक्रिया नगर्न निर्देशन
सबै सञ्चारगृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्छु : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
लामो दुरीको यातायात असोज १ देखिनै खुल्ने, भाडा ५० प्रतिशत बढ्यो
आजबाट खाद्य सामग्री पसल बिहान र साँझ मात्र खोल्न पाउने
काठमाडौंमा ४७ प्रतिशतले लगाए कोभिड–१९ विरुद्धको खोप
शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा क्षेत्र एकदमै अस्तव्यस्त भए : पूर्वराष्ट्रपति यादव
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको काम शुरु : ७० करोड खर्च हुने अनुमान
आजबाट सार्वजनिक सवारीमा क्षमता अनुसार यात्रु राख्न पाइने
घरायसी झगडाको कारण श्रीमतीको हत्या, श्रीमान आफैँ प्रहरी चौकीमा !
आज कुकुर तिहार तथा लक्ष्मीपूजा एकैदिन मनाइँदै
१७ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम पनि सुस्तायो